'Sharka Dhimashada' wuxuu bilaabay wax soo saar wuxuuna la wadaagayaa sawir qabow - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh 'Sharka Dhimashada' wuxuu bilaabay wax soo saar wuxuuna la wadaagayaa Sawir qabow
'Sharka Dhimashada' wuxuu bilaabay wax soo saar wuxuuna la wadaagayaa Sawir qabow
Mar iyo mar baan idhaahdaa. Inbadan Xun dhintay war waa war wanaagsan. Wararkii ugu dambeeyay ee ka baxsan dhintay xero waa taas Sharka Dhimashada Sare ayaa bilaabay wax soo saar… maanta. Hooray!
Asal ahaan waxaa la rumaysan yahay inuu bilaabayo wax soo saar dabayaaqada sanadkan, waxay ahayd layaab weyn oo sax ah oo fiican in la arko agaasime Lee Cronin oo soo dhigaya sawir aad u qabow oo ka socda bartiisa Twitter-ka oo muujinaya bilowga wax soo saarka. Khatarta xun ee sharka lehe. Bruce Campbell iyo Sam Raimi waxay ku jiraan soosaarayaal cutubkan; taasi waxay arki doontaa dadka dhintay inay galaan jawi magaalo oo ay ka baxaan xayndaabka keymaha iyo qolka.
Waqtigaan wax badan lagama oga halka ay ku taal Xun dhintay waqtiga Kaca ku habboonaan doonaa. Tusaale ahaan, ma waxay noqon doontaa taxane seddex geesoodka asalka ah ee Bruce Campbell - Ashley Williams dibedda ama ma laga yaabaa inay ka baxdo reboot? Mise laga yaabee inay wada noqon doonto wadaad hore? Hal shay waa hubaal, inbadan Xun dhintay waa wanaagsan yahay.
Lilly Sullivan iyo Alyssa Sutherland labaduba waxay qarka u saaran yihiin inay kasoo muuqdaan Sharka Dhimashada Sare waana ku faraxsanahay arintaas sidoo kale. Lee Cronin oo jiheeyey Hole ee Ground, Hada wuxuu indhaha saaraa dadka dhinta. Kadib markaan arkay God ku yaal dhulka rajo ayaan haynnaa. Filimadu aad ayey u kala duwan yihiin. Iyadoo la tixgelinayo ruxitaanka dhagxaanta gantaal ee Xun dhintay filimada iyo sida gaabiska ah ee gubashada iyo xawaaraha gla gla of Hole ee Ground. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida uu ugu qaato maaddada. Sida dhamaanteen, Cronin waa taageere faransiisnimada, sidaa darteed waan hubaa inuu sameyn doono sida ugu macquulsan ee uu na siinayo Xun dhintay film.
Maxaad u maleyneysaa ragga ku saabsan wararka soo saarista qabow iyo sawirka Sharka Dhimashada Sare? Noo soo sheeg qaybta faallooyinka.
Maalinta 1. #EvilDeadRise pic.twitter.com/bWNpC8Ex3b
Rob Zombie wuxuu xaqiijiyay ku lug lahaanshihiisa The Munsters ee Universal. Halkan ka akhriso.
Ciidamada mugdigaBruce CampbellXun dhintaySharka Dhimashada SareLee CroninSam Raimi
Rob Zombie wuxuu xaqiijiyay filimkiisa soo socda inuu la jaan qaadi doono 'Munsters' TV Sitcom